Soomaaliya, 03 October 2018
Arbaco 3 October 2018
Wareysi: Dagaalka Macawiisleyda iyo Al-Shabaab
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayey dagaallo u dhexeeyey maleeshiyaad is-ababaulay iyo maleeshiyada ururka Al-Shabab. Dagaalladan ayaa ka socday gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Cilmi-baaris xog ka bixisay Daacishta Soomaaliya
Warbixin cusub oo maanta soo baxday ayaa ka hadlaysa cuddudda iyo weerarrada ay maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugan Soomaaliya ku gaystaan Puntland iyo Muqdisho iyo agagaarkeeda.
Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 439-aad
Maxaa xal u ah khilaafka madaxda Soomaalida?
Waxaa weli ismari-waa uu u dhexeeyaa madaxda dawladda sare iyo madaxda maamul goboleedyada kadib markii dhowaan ay madaxda ku jirta golaha iskaahsiga maamul goboleedyadu sheegeen inay joojiyeen xiriirkii dawladda dhexe.
Cilmi baaris ay wada jir ah u sameeyeen hay'adaha Farsight Africa iyo IPSOS ayaa muujineesa in hoos dhac kalsoonida dadweynaha ay ku qabaan hey’adaha dowladdu ay jirto xilligan marka loo eego sanadkii 2017-kii.
Mareykanka oo duqeyn ku dilay sagaal Shabaab ah
Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay ugu yaraan sagaal mintidiin Shabaab ah ay ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday Koonfurta Soomaaliya, taasi oo la fuliyey kadib markii Shabaabka ay weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Wareysi: Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya